वीरमा बेथिति : १५ दिन काम गर्दै महिनाको तलब खान्छन् कर्मचारी – Health Post Nepal
वीरमा बेथिति : १५ दिन काम गर्दै महिनाको तलब खान्छन् कर्मचारी
२०७७ पुष २९ गते १३:११
वीरमा बेथिती : दुई महिनादेखि मेडिकल वार्ड बन्द
स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो ठुलो संख्यामा कर्मचारी
देशका गरिब विपन्न वर्गले सेवा पाउने अस्पताल भन्ने वित्तिकै सबैको मानसटलमा वीर अस्पतालको तस्बिर झल्किन्छ।
सबैको नजरमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अविभावकत्व बोकेको अस्पताल हो वीर। तर, वीरले जुन रूपमा अभिभावत्वको भूमिका निवार्ह गर्नुपर्ने हो त्यसमा चुकिरहेको छ।
खरिद गरिएका उपकरण छिट्टै बिग्रने, आर्थिक अनियमितता जस्ता समस्याले थलिएको छ वीर। यी समस्या सर्वसाधारणले वर्षौदेखि सुन्दै आएका छन्। तर, सम्बन्धित निकायले यसको समाधानमा ध्यान दिएको पाइँदैन।
अरु त परकै कुरा सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यहाँका कर्मचारीले काम नै नगरि तलवसमेत बुझ्ने पाइएको छ।
दिनहुँ वीरमा २ हजारबढीको संख्यामा नागरिकहरू सेवा लिन आउँछन्। तर, सबै बिरामीले राम्रो सेवा पाउन सकिरहेका हुँदैनन्। राम्रो सेवा नपाएकोभन्दै थुप्रै बिरामी अमिलो मन बनाएर फर्कि रहेका हुन्छन्।
सुविधासम्पन्न सेवा लिनकै लागि देशको दुर्गम क्षेत्रबाट आउने विपन्न नागरिकहरूले समयमै गुस्तरिय सेवा नपाएर सास्ति खेपिरहेका समाचार बेला-बेला आउने गर्छन्।
आफ्नो डियुटी समयमै पैसाकै लागि निजी क्लिनिक धाउने यहाँका अधिकांश चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पुरानो खेती आजसम्म पनि चलिरहेको छ।
अर्को आर्चयकुरा के भने, अस्पतालमा एक छिन पाइला नै नटेकी कर्मचारीले तलब बुझ्नेगरेको कुरा बाहिरिएको छ।
अस्पतालका व्यवस्थापकिय कमजोरी तथा स्वास्थ्यकर्मी स्वयंले गर्दै आएको हेलच्याईको मार आम नागरिकले खेप्नु परिरहेको छ। जसले गर्दा थुप्रै नागरिक गुणस्तरिय स्वास्थ्यसेवा लिनबाट बञ्चित हुन पुगेका छन्।
लामो समयदेखि जरजर रहेको अवस्थामा सुधार नआए वीरको दुर्गति झन नाजुक हुने सेवाग्राहिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अस्पतालमा पाइलै नटेकि तलब बुझ्छन्
‘सरकारी काम कहिँले जाला घाम’ भन्ने नेपाली उखान वीर कर्मचारीका लागु भइरहेको छ।
अस्पताल प्रशासनको मंसिर महिनाको कर्मचारी लिष्ट हेर्दा २ सयभन्दा बढी कर्मचारी जानकारी बिनै अनुपस्थित भएको पाइएको छ।
सरकारले गत चैतदेखि कोरोना महामारी कारण सबै अस्पतालका कर्मचारीलाई आलोपालो गरी ड्युटी गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कोरोना महामारीको फाइदा वीरका कर्मचारीले लिनेगरेको पाइएको छ।
‘सरकारको उक्त निर्देशनपछि हामीले हाजिरमा खासै कडा गरेका थिएनौं। तर, मंसिर महिनाको हाजिर हेर्दा धेरै संख्यामा कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइयो,’ निर्देशक डा. केदार सेञ्चुरीले भने।
‘अन्य बेलामा तलव निकाशा गर्दा हाजिर हेरर गर्ने गरिएको थियो,’ डा. सेञ्चुरीले हेल्थपोष्ट सँगको कुराकानीमा भने , ‘महामारीका कारण आलोपालो डिउटी गर्ने भनेकाले हामीले हाजिरिमा कडाइ गरेका थिएनौं। तर, उहाँहरूले त्यसको गलत फाइँदा उठाउनु भयो।’
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको र नन कोभिडका बिरामी बढ्न थालेकाले कर्मचारीको हाजिरिमा कडाइ गर्ने निर्देशक सेञ्चुरीले बताए।
‘अस्पतालमा नन कोभिडका बिरामी बढ्न थालेसँगै हामीले एक पटक हाजिर चेक गर्ने अभियान सुरू गर्यौं,’ डा. सेञ्चुरीले भने, ‘ इलेक्ट्रोनिक हाजिर गर्ने सिस्टम राखेको भए पनि २ सयभन्दा बढी कर्मचारीले नियमित हाजिर नगरेको पाइयो।’
अस्पताल प्रशासनले हाजिर नगर्ने २ सयभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोक्का गरेर छानबीन सुरू गरेको उनले बताए।
‘कतिपय कर्मचारीले आएको समयको मात्र हाजिर गर्ने, कतिले जानी-जानी हाजिर नगर्ने, कोही अस्पताल नै नआएको पाइयो,’ डा. सेञ्चुरीले भने, ‘ अनुपस्थित भएका व्यक्तिलाई तलव खुरू,खुरू दिने कुरा त भएन नी।’
‘अस्पतालले जारि गरेको नियम सबैका लागि हो। र, यसको पालना नियमित रूपमा सबैले गर्नुपर्छ। नियम पालनामा हेलचेक्र्याई गर्ने कर्मचारीको तलब रोक्का हुन्छ। नियमित हाजिर हुन नसक्नुको कारण हामीले सोधेका छौं। उहाँहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ आएमात्रै तलब निकासा गरिने छु, उनले भने।
उनले कोरोना संक्रमित भएर बसेका केही कर्मचारीले जानकारी नै नगराई बिदा बसेको समेत बताए।
‘कोहि व्यक्ति भदौमा बिदा बसेको अहिले निवदेन पेश गरिराख्नु भएको छ। अस्पतालको नियम हुन्छ। बिदामा नै बस्नुपर्ने छ भने सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी त हुनुप्रयो नी,’ उनले आक्रोस पोखे।
मसिंर महिनाको हाजिर हेर्दा १५ दिनभन्दा कम हाजिर भएका २ सय जति रहेको पाइएको छ।
अस्पताल अनुपस्थित भएको उचित कारण पेश गर्नेको लागि सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराएको उनले बताए।
‘तलब काटिएपछि उहाँहरूले हाजिर नगर्नुको कारणसहित निवेदन दिन निर्देशन दिएका छौं,’ डा. सेञ्चुरीले भने, ‘यदि काम गरेर हाजिर नभएको वा सिस्टमले रिड नगरेको छ भने छानबीन गरेर मात्र एकपटको लागि तलब निकाशा गर्छौं।’
डा. सेञ्चुरीले अस्पतालमा ड्युटी नै नगरेका र हाजिर नभएका कर्मचारीको हकमा भने तलब निकाशा नहुने बताए।
‘मंसिर महिनामा त अस्पताल प्रशासनले हाजिरि हेर्यो। तर, यसभन्दा अघिल्ला महिनाहरूमा पनि कर्मचारीको हेलचेक्र्याइ यस्तै हो’, अस्पतालका एक कर्मचारीले भने।
यसमभन्दा अगाडी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले ४ घन्टा पनि समय नदिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार वीर अस्पतालमा कार्यरत २६ चिकित्सकले २०७५ श्रावण महिनामा औसतमा ४ घन्टा मात्र समय बिताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
श्रावण महिनाको विद्युतीय हाजिर परीक्षण गर्दा महिनामा ९३ देखि १ सय ४३ घण्टामात्र उपस्थित भएको देखिएको महालेखाले जनाएको थियो।
उपकरण र आवश्यक चिकित्सकको अभावमा न्यूरो हाडजोर्नी जस्ता शल्यक्रियाको लागि बिरामीले तीन महिनासम्म कुनुपर्ने अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Tags: कर्मचारी, बेथिति, वीर अस्पताल